अत्यन्तै दुःखद घटना: झापामा असार महिनाको झरिमा यस्तो अविवेकि बन्दै मान्छेहरू – PathivaraOnline
Home > भिडियो > अत्यन्तै दुःखद घटना: झापामा असार महिनाको झरिमा यस्तो अविवेकि बन्दै मान्छेहरू
अत्यन्तै दुःखद घटना: झापामा असार महिनाको झरिमा यस्तो अविवेकि बन्दै मान्छेहरू
admin June 28, 2020 भिडियो, समाज	0
झापा । मानिसहरु कति अविवेकी बन्दै गएका छन् । संस्कार, धर्म मुल्य मान्यता सबै गुम्दै गएको छ । यो एउटा उदाहरण पस्किदा हामीलाई पनि निकै नराम्रो लागेको छ । झापामा एक पुरुषले छोरी नाता पर्ने युवतीलाई भगाएर लगेका छन् । आफ्नो श्रीमतीको दिदीको छोरीलाई लिएर हिडेका छन् । हरिमाया राई जो चौधरीको छोरी हुन् । उनका श्रीमानले एक साता अघि आफ्नै दिदीको छोरी लिएर हिँडेका छन् ।
उनले श्रीमान र छोरी हिडेपछि एक साता देखि उनीहरुको खोजी गरिहेकी छन् । उनलाई पहिले नै छिमेकीले पनि उनीहरुका बारेमा हरिमायालाई नभनेका भने होइनन् । तर आफ्नै छोरीले यस्तो बेइमानी गर्छ होला भन्ने कल्पना पनि गरिनन् । उनले त्यो छोरीलाई आफ्नै दुध खुवाएर हुर्काएकी थिइन् । त्यो छोरीको वुवाको निधन भएपछि उनले आफुले नै छोरीलाई पाल्दै आएकी थिइन् ।
सलह बेचेर वुटवलका दुई युवायुवतीले यसरी कमाए पैसा!
विर अस्पतालमा बेवारिसे अवस्थामा बेलायती नागरिक ! रुदै भन्छन्- मलाई मेरो देश फर्काइदिनुस (भिडियो हेर्नुस)